Home News Beesha Waceysle oo saluug ka muujisay kursiga wasiirka ganacsiga iyo hab dhaqankiisa.
Beesha Waceysle oo saluug ka muujisay kursiga wasiirka ganacsiga iyo hab dhaqankiisa.
Iyadoo lagu guda jira xili xasaasi ah oo dowladda Farmaajo ku mashquulsan tahay sidii ay seameyn ugu yeelan laheyd dhismaha maamulka Galmudug ayaa waxaa waxaa soo food saaray culeys dhinaca nidaamka awood qeybsiga beelaha ah.
Xukuumadda iyo madaxtooyadda ayaa adeegsanaayo tab cusub oo wasiirada iyo xildhibaanada kasoo jeeda Galmudug si ay wood ugu yeeshaan doorashada soo socota, waxayna xukuumadda iyo Villa Somalia isla garteen in la adeegsado wasiirada kasoo jeeda goboladaasi, iyadoo durbadiiba uu daah furay wasiirka ganacsiga oo danihii beesheesha uu madalayay ka door-biday mid shaqsiyadeed, wuxuuna ku taageeray xukuumadda iyo kooxda Villa Somalia in doorashada Galmudug noqoto mid u gogol xaarta doorashooyiska qaran ee la filaayo in ay ka dhacaan 2020-21.
Kulamo qarsoodi ah oo looga tashanaay mustaqbalka kana qeyb galay wasiirka ganacsiga ayaa ayaa looga hadlay sidii guul looga gaari lahaa iyadii wasiir walba loo xil saaray in beeshiisa iyo dadka taageera ugu dhaadhicin lahaa fikradaha wadaniyeed ee madaxweyne Farmaajo.
Waxaase jira ku kala qeybsanaan xafiiska madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha oo mid walba dhinac u ordaayo hase ahaatee aan muuqan.
Kulan qarsoodi ah oo wasiirka ganacsiga Eng C/laahi Cali Xasan la yeeshay beesha uu kasoo jeedo ayaa looga tashaday doorashada soo socota ee qofka u madalaya golaha shacabka waxaana uu wasiirka wacad ku maray in xiligaan jilibka uu kasoo jeedo waqtigeeda la joogo loona baahan yahay in loo midoowo wax uu ku sheegay xeeryo iska qaadka.
Beesha Waceysle ayaa horay ugu tabaneysay wasiirka ganacsiga tabashooyin iyo inuu jilabyada kale ee beesha ka hor istaagay ka inay ka mid noqdaan guddiyada doorashooyinba baarlanaanka ee Galmug isagoona shaqsi ku beel ah u soo xulay gudiga doorashooyiska Galmudug.